သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးစျေးပေါ Laptop ကိုရှေးခယျြကူညီပေးနိုင်ပါသည်? - သတင်း Rule
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးစျေးပေါ Laptop ကိုရှေးခယျြကူညီပေးနိုင်ပါသည်?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဦးစျေးပေါ Laptop ကိုရှေးခယျြကူညီပေးနိုင်ပါသည်?” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 16 ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2015 11.15 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က, အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာဖွင့်ထုပ်ပိုး, ဒါကြောင့်ကျွန်မအနေနဲ့ပြင်ပ hard drive ကိုမှလိုခငျြသမြှကိုလွှဲပြောင်းနှင့်ကဖယ်ရှားပစ်တယ်. ငါကို web browsing အတွက်တူအခြေခံပညာအမှုအရာအဘို့စမတ်ဖုန်းရှိသည်နှင့်အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးနေ, နှင့်အရာအားလုံးထက်ငါက USB တုတ်နှင့်အတူဒေသခံစာကြည့်တိုက်များအတွက်ဦး. ဒါဟာအတော်လေးနည်းနည်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းမသည်ငါ့ကိုကယ်တင်င် (နှင့်ဆက်စပ်ဖုန်းလိုင်း) လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကျော်. သူကပြောပါတယ်, ငါ Laptop ကိုများအတွက် hankering တာပါ, ငါမူကားအဘယ်မှာရှိစတင်ရန်မသိရပါဘူး: င်း 10 ငါနောက်ဆုံးကွန်ပျူတာကိုဝယ်ကတည်းကအနှစ်!
ငါသည်တလက်ကိုင်အိတ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစားကြောင်းအရာတစ်ခုခုလိုချင်ပါတယ် / ရာဘေးစားပွဲအံဆွဲ (ငါသည်တပြားချပ်ချပ်နှင့်သိုလှောင်အာကာသအတွင်းဖြစ်ကြောင်းကိုပရီမီယံဖြစ်ပါသည်). ငါက Microsoft Word ကို run ချင်တယ် (ငါဖန်စီ features တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်), တွေထဲမှာ macro virus တွေနှင့်အတူ Excel ကို (ငါက Google docs ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါအတူလုပ်ကိုင်တာပါထိုစာရွက်များကြီးလွန်း / ထိုသို့ခေတ်မီဆန်းပြား), ဝဘ်ပစ္စည်းပစ္စယ — ပုံမှန်အတိုင်းကြည့်ရှုခြင်း, YouTube ကို, စသည်တို့ကို blogging — နှင့်ဂီတ. ငါ CD များကိုချစ်, ဒါပေမဲ့ပြင်ပကို CD / DVD ကိုကစားသမားငါစဉ်းစားပါတယ်အရာတစ်ခုခုသည်. ဘတ်ဂျက်? ငါမစိတ်ကူးပါတယ်, ဒါပေမဲ့မဝန်. ကေတီ
သငျသညျကိုဝယ်ခြင်းငှါကောင်းတစ်ဦးအချိန်ခူးင်, Windows ကိုလက်တော့ပ်ယခုအချိန်တွင်စျေးပေါကြောင့်. အရောင်းဆင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသည်, သူတို့က Windows XP ကိုအပြေးကွန်ပျူတာများအစားထိုးကတိုးမြှင်ကြသောအခါ, နောက်ထပ်က Windows ၏ပစ်လွှတ်မှုအတွက်စောင့်ဆိုင်းကစိတ်ကျရောဂါပြီ 10 အပေါ် 29 ဇူလိုင်လ. ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လက်လီရောင်းချသူများထို့ကြောင့်အဟောင်းကိုစတော့ရှယ်ယာကိုရှင်းလင်းဖို့စိတ်အားထက်သန်ကြသည်.
ယနေ့တွင်, Windows ကိုလက်တော့ပ်ပတ်ပတ်လည်£ 159,99 မှာစတင်, သငျတို့သ£ 200 မှ£ 400 ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စက်တွေရနိုင်. ငါသည်သင်တို့ကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာကအများကြီးပိုကုန်မျှော်လင့်ထား, ဖြစ်နိုင်£ 650 မှ£ 1,500 မှ. (ဒီဇင်ဘာ 2005 PC ကွန်ပျူတာ Pro ကိုမဂ္ဂဇင်း၏ပြဿနာ£ 799 မှာ "bargain" မှတ်စုစာအုပ်၏အုပ်စုတစုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။)
မဆို Windows ကို 8.1 သငျသညျယခုမဝယ်လက်တော့တစ်ရလိမ့်မည် Windows ကိုမှအခမဲ့ "အရပျ၌" အဆင့်မြှင့် 10, နဂိုအတိုင်းသင့်ရဲ့အစီအစဉ်များနှင့်ဒေတာကိုစွန့်ခွာသင့်သော.
Screen အရွယ်အစားနှင့် CD များ
ပုံမှန်လက်ကိုင်အိတ်အတွက် fit ကြောင်း laptops 12 ဖန်သားပြင်မှ 10in ပြီ, တစ်ရာဘေးစားပွဲအံဆွဲဖြစ်ကောင်းတစ်ဦး 13.3in မျက်နှာပြင်စီမံခန့်ခွဲမည်နေစဉ် (သတ္တုတွင်းပါဘူး). သို့သော်, မျက်နှာပြင်အသေးငယ်, စာသားအသေးငယ် (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen resolution ယူဆလျှင် 1366 x က 768 pixels ကို, စျေးပေါလက်တော့ပ်များအတွက်အသုံးအများဆုံးပုံစံသောဖြစ်ပါသည်). သငျသညျကြီးများစာရင်းဇယားကို run ချင်ကတည်းက, ငါ 11.6in လက်တွေ့နိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တတ်သည်ဟုယူရ၏နှင့် 13.3in ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်.
သင်တစ်ဦး 13.3in မျက်နှာပြင်အလိုရှိခဲ့လျှင်, ထို့နောက် Dell က XPS 13 (2015) မြားစှာသောလက်ကိုင်အိတ်အတွက် fit ဖွယ်ရှိတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းအကွာအဝေးထဲကဖြစ်ပါတယ်.
အနည်းငယ်မဆိုသေးငယ်တဲ့လက်တော့ပ် built-in လျှင် CD-Rom သို့မဟုတ် DVD ကို drive တွေကို, 15.6in ဖန်သားပြင်နှင့်အတူလက်ပ်တော့များတွင်ဘုံနေသော. သူတို့သညျလက်ကိုင်အိတ်အဘို့လည်းကြီးမားသောနှင့်လည်းလေးလံသောများမှာ, တစ်ရာဘေးစားပွဲအံဆွဲဘို့လည်းကြီးမားသောဖြစ်စေခြင်းငှါ,. သို့သော်, သငျသညျ£ 25 £ 10 က USB port ကိုသို့ plug နိုငျသောပြင်ပကို CD / DVD ကိုစာရေးဆရာများများများရှိပါတယ်. အကယ်. သင်သည် Windows ပြန်လည်ထူထောင်ရေး discs တွေကို၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်အပို Backup တွေကိုလုပ်နေတဲ့ DVD ကိုစာရေးဆရာအသုံးပွုနိုငျ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကစားဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်.
ယနေ့စျေးပေါလက်တော့ပ်အတော်လေးနှေးကွေးက Intel Celeron N28xx ပရိုဆက်ဆာများ, အမြန်ဆုံးအ N2840 သော၏. အဆိုပါ Pentium N35xx အကွာအဝေးတစ်ခုကျိုးနပ်တိုးတက်မှုကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်, နောက်တဖန်, အ N3540 အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါ Intel ရဲ့ Atom Z3795 အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်, နှင့် N3510 နှင့် N3520 အကြားလာ. ဤဆို Microsoft Word ကို run ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ Excel ကိုအတွက်ကြီးမားသော Spreadsheet တွေနှင့်အတူရုန်းကန်နိုင်. အလုပ်၏မျိုးများအတွက်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးက Intel Core i3 သို့မဟုတ် i5 မှ Processor ကိုမှတက် step မှပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်.
Celeron နှင့် Pentium ရိုးရိုးအမှတ်တံဆိပ်များမှာ. architecture, ဤသူချစ်ပ်များမှာ အက်တမ် Silvermont (ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Trail) ဒီဇိုင်းများ.
NoteBookCheck ရဲ့ မိုဘိုင်း Processor များ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (CPU ကို benchmark) Processor ကိုအမြန်နှုန်းနှိုင်းယှဉ်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. ထိုရမှတ်များနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျမနေပါနဲ့, ကိုယ့်ချစ်ပ် table ထဲမှာရပ်ဘယ်မှာကြည့်ဖို့ code ကိုဂဏန်းကိုရှာ. သင်တို့သည်လည်းအလုပ်မှာသင်အသုံးပြုတဲ့ PC မှာအတွင်း chip ကိုဖွင့်ကြည့်ရင် (System ကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှာဖွေရေး) ကြောင်းသင်ဆွေမျိုးအမြန်နှုန်းအချို့ကိုစိတ်ကူးကိုငါပေးမည်.
အဆိုပါစျေးအချိုဆုံးလက်တော့ပ်မှတ်ဉာဏ် 2GB ပါရှိ, Windows နဲ့အလင်းအသုံးပြုမှုအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ပါသည် 8.1 နှင့် 10, ဒါပေမဲ့ 4GB သိသာသည် သာ. ကောင်း၏.
အဆိုပါစျေးအချိုဆုံးလက်တော့ပ်သိုလှောင်မှု 32GB ရှိ, အခြေခံအားဖြင့် Motherboard ကမှရှိတာပါတစ်ဦး eMMC Flash ကိုမှတ်ဉာဏ် chip ကိုရာဖြစ်ပါသည်. Microsoft က Windows နဲ့သူ့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး partition ကိုအသုံးပြုတဲ့အာကာသနုတ်, နှင့်သင့်ဒေတာအတွက်အနည်းငယ်သာလက်ဝဲရှိပါတယ်. သူတို့တစ်တွေ 32GB သို့မဟုတ် 64GB SD က / microSD memory card ကိုတစ်ဦး slot ပါရှိပါကဤကဲ့သို့သော laptops အသုံးဝင်သောများမှာ, ဒါမှမဟုတ်သင်က Microsoft အတွက်အခမဲ့အွန်လိုင်းသိမ်းဆည်းတိုက်ရိုက်ဖိုင်တွေကိုကယျတငျနိုငျ OneDrive.
သာ. ကောင်း၏လက်တော့ပ်ပိုမြန်ပေမယ့်ပိုပြီးစျေးကြီး 128GB သို့မဟုတ် 256GB SSDs ရှိစေခြင်းငှါ (အစိုင်အခဲပြည်နယ် drives တွေကို). သို့သော်, သင်သည်သင်၏ laptop ကိုအပေါ်ဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်သိမ်းဆည်းထားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးရိုးရာ 500GB hard drive ကိုနှင့်အတူပယ်ပိုကောင်းစေခြင်းငှါ. သင့်ရဲ့ Laptop ကိုလျော့နည်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုကိုင်လိမ့်မည်.
£ 2,000 မှ£ 200 မှလက်တော့စျေးနှုန်းတွေထဲမှာသိသိသာသာပြိုလဲရုံကဆင်းစျေးနှုန်းချိုသာချစ်ပ်ရန်မဖြစ်. ထုတ်လုပ်သူလည်းစျေးနှုန်းချိုသာ keyboards ကိုအသုံးပြုနေ, စျေးနှုန်းချိုသာဖန်သားပြင်, နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာပလပ်စတစ်အမှု. ထုံးစံအတိုင်း, သငျသညျသင်တို့အဘို့အပေးဆောင်ရ. ဖြစ်နိုင်လျှင်, ယောဟနျသ Lewis က၏ကွန်ပျူတာဌာနများသွားရောက်, အဖန်သားပြင်ကိုကြည့်ပါနှင့် Keyboard ကိုကြိုးစားရန် PC ကိုကမ္ဘာ့ဖလားနှင့်အလားတူဆိုင်များ.
အရထားတယ်ဖတ်နဲ့စျေးအချိုဆုံး option ကိုသွားစုံစမ်းနှောင့ဒါဟာင်. သို့သော်, သငျသညျအနားမှာ PC များဘက်မြင်လျှင်, သငျသညျကချမ်းသာဘို့နည်းနည်းပိုပြီးပေးဆောင်ရကျိုးနပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်စေခြင်းငှါ, တောက်ပသောမျက်နှာပြင်, တစ်ဦးထက်ပိုတုံ့ပြန်မှုကီးဘုတ်, တစ်ဦးထက်ပိုသောအစိုင်အခဲအမှု.
ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးမျှမျှတတအလင်း Laptop ကိုအသုံးပြုသူဖြစ်ခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းချင်ပါတယ် - တစ်သတိထားတစ် - တစ်ရှိခြင်းမဟုတ်စဉ်သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးင်. ဒါကြောင့် အကယ်., တစ်ဦး cheapish Laptop ကိုဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်. လေးလံသောပမာဏရှိပြီးအမှုအရာအပြီးကြည့်ရှုဖို့မလေ့ရှိသူများ၏မျိုးကိုပိုပြီးအားကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုဝယ်သင့်ပါတယ်, ထို့ကြောင့်ပိုပြီးစျေးကြီး.
တွင် £ 169,99 သို့မဟုတ် £ 179,99, အ Lenovo က Flex ကို 10 ယခုအချိန်တွင်a"ကအကောင်းဆုံးဝယ်" တူ, ဒါကြောင့်လက်ရှိ Amazon.co.uk မှာရောင်းထွက်မယ့်သော်လည်း. ဒါဟာ 2.16GHz Celeron N2840 Processor ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့အများဆုံးစျေးပေါလက်တော့ပ်နဲ့မတူပဲ, ဒါကြောင့်မှတ်ဉာဏ်၏ 4GB နှင့် 320GB hard drive ကိုရှိပါတယ်. ငါသည်တ Flex ကိုအသုံးပြု 10 တစ်ပိုမြန် N3510 Processor ကိုနဲ့မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကစျေးနှုန်းပျမ်းမျှအထက်ထင်. လည်း, ဒါဟာအတော်လေးကောင်းစွာလုပ်သလိုပဲ.
အဆိုပါ Lenovo က Flex ကို 10 သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူအပေါ်ကိုအနိုင်ပေး - ကအလွယ်တကူကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့လက်ကိုင်အိတ်ကိုက်ညီ - ဒါပေမယ့်သင်တို့ကိုငါနည်းနည်းသေးငယ်လွန်းမျက်နှာပြင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ထင်. သို့သော်, သင်စတိုင်ကိုကြိုက်လျှင်, သင်တစ်ဦးအနီရနိုင် Lenovo က Flex ကို214 တစ်ဦး 14in ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ, core processor ကို i3-4030, 4£ 349,99 အဘို့မှတ်ဉာဏ်နှင့် 500GB hard drive ကို၏ GB ကို. အဆိုပါ 1.9kg Flex ကို 14 တစ်လက်ကိုင်အိတ် overstrain မယ်လို့ဒါပေမဲ့သင့်ရဲ့အံဆွဲ fit နိုင်.
အဆိုပါ Flex ကို 10 ၏အဓိကပြိုင်ဘက်အ HP က Stream ဖြစ်ပါသည် 11, ရရှိနိုင်သည့်ဖြစ်ပါသည် ပြာသော သို့မဟုတ် ပန်းခရမ်းရောင် ဘို့ £ 159,99. N2840 - ဤနိမ့်ဆုံး-spec စက်ဖြစ်ပါတယ်, 2GB ကို, 32GB ကို eMMC - ဒါပေမယ့်ဝယ်လက်ကအများကြီးကြိုက်နှစ်သက်ဟန်. နာမတျောအဆိုတာကိုပြသထားသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်တစ်ဦး 11.6in မျက်နှာပြင်ရှိပါတယ်. တစ်ဦးလည်းရှိပါတယ် ရေနွေးငွေ့ 13 အလားတူသတ်မှတ်ချက်ပေမယ်£ 229,95 များအတွက် 13.3in မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ.
သို့သော်, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦး 11.6in ဝယ်ယူပယ်ပိုကောင်းဖြစ်င်ထင် acer မှ E3-112 (N2840, 4GB ကို, 500GB ကို) £ 219,99 သို့မဟုတ်များအတွက်, ဖြစ်နိုင်ရင်, တစ်ဦး Touch-screen ကို Acer Aspire V3 (N3540, 4GB ကို, 500GB ကို) £ 249,99 များအတွက်.
နောက်ထပ်အခြားရွေးချယ်စရာအ 11.6in Touch-screen ကိုဖြစ်ပါတယ် Asus က VivoBook X200CA တစ်ဦးက Intel Celeron 1007U နှင့်အတူ, 4မှတ်ဉာဏ်၏ GB လောက်နှင့် 500GB hard drive ကို. ဒါကတစ်ဦးအဟောင်းတွေဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်လည်းကအချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုရပ်နိုင်ပြောနိုင်ပါတယ်သော်လည်း. (ဒါဟာ Asus က S200E မှဆင်းရဲ့, ငါအများကြီးကြိုက်တယ်။)
သငျသညျထွက်မှာသုတျဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, အ Lenovo Yoga အပေါ်မူကွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်211.6in နှင့် 13.3in ဖန်သားပြင်နှင့်အတူပြောင်း Touch-screen ကိုဒီဇိုင်း. အဆိုပါ Lenovo Yoga211 ပတ်ပတ်လည်£ 389,99 မှာစတင် (N3520, 4GB ကို, 500GB ကို), ဒါမှမဟုတ်သင်အဘို့အသွားနိုင် တစ်ဦး 13.3in မျက်နှာပြင်နှင့်အတူငွေမော်ဒယ် £ 429,95 များအတွက် (core i3-4030U, 4GB ကို, 8GB ကို + 500GB). ကြောင်းတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်? သင်တစ်ဦးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းအပေါ်ပိုပြီးသုံးဖြုန်းနိုင်.
35934	0 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, Blogposts, computing, ဂျက် Schofield, laptop များ, နည်းပညာ
← Windows ကို 10: ပိုပြီး Microsoft က apps တွေကို Android နဲ့ iPhone မှလာကြ၏ Sony ရဲ့လာမယ့်ကြီးမားတဲ့အရာကင်မရာကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည် →